Imixholwana ye-aquarium | Ngeentlanzi
Xa uxhobisa i-aquarium, ungalibali Imigca ephantsi. Kwimarike kukho uluhlu olubanzi onokukhetha kulo. Kodwa uhlala ukhumbula ukuba ukuba kukho izityalo kufuneka ibengu-a i-substrate yesondlo. Ukusukela, nangona izityalo ziqokelela izondlo ezininzi, Ngamagqabi awo, zikwasebenzisa neengcambu ukufunxa.
Kukho nezi iigrabile kunye neentlabathi ezisetyenziswa njengesiseko. Okanye njengomhombiso kugcino mhlaba, nokuba unee-shades ezahlukileyo ukunika i-aquarium isiphumo esingcono. Babizwa ngokuba yi-inert substrate kwaye ibonakalisiwe kwabasaqalayo, kuba ayifuni ngqwalaselo okanye ulawulo lwamanzi.
Ezinye iintlobo ze-substrate
Kukho iziqwengana zesondlo. Aba banoxanduva lokubonelela ngesichumiso esifunekayo kwizityalo ezikwi-aquarium. Isikakhulu le substrate ibekwe ngesanti okanye igrabile ngaphezulu ukunqanda isakhamzimba ukuba singadibani namanzi.
Ezi ntlobo zemiqolo ephantsi zinokubuyela umva. Inkqubo ye- Iingcambu zezityalo zinokuphela zihambisa isiseko. Ekugqibeleni yayiza kuphuma ngaphezulu kwesiseko segrabile. Nangona kunjalo, kukho olunye uhlobo lwe-substrate esele ixutywe nezakha-mzimba kunye nentlabathi ukulungiselela ukuhlala kwi-aquarium. Nokuba ingashukunyiswa kangakanani i-aquarium, ayizukuphazamiseka.
Los Imigca emincinci kufuneka ilungelelaniswe kwi-aquarium nganye Kwaye ngakumbi ukuba siyathetha ngabaqalayo, akuyomfuneko ukwenza ubunzima ekubeni yi-aquarium elula. Logama inesondlo ukuze izityalo zihlale kwaye i-ecosystem ingashukumi, iya kuba yeyona ilungileyo.
Ukuba, ngokuchaseneyo, ujonge Indalo kunye nezityalo ezahlukileyo kunye ne-aquarium yamanani amakhulu, i-substrate kufuneka ihambelane neemfuno. Imigca emincinci yesondlo elawula iiparameter kwaye ifunxa izondlo ezingaphezulu eziveliswa yi-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Imixholwana ye-aquarium
UVALERIA PEREZ sitsho
NDICINGA NGOKUBA NENTLANGANISO YOKUPHATHA IINTSHOLONGO UMNINI WESITOLO WANDIXELELA YONKE INTO ENDIYIDINGAYO KANYE KUFUNEKA NDIYAZI NGABO KODWA ANDIZI UKUBA NDINGAHLUKANISA NJANI INKOSI YABESIFAZANE KWI-MALE AND NDIFUNA INDODA NGOBA BABONAKELE KAKHULU KWIIMPAWU ZABO. KAKHULU NDINGATHANDA UKWAZI UKWAHLULELA INTLanzi YABASetyhini KWINTLOKO EYINTLOKO
Phendula u-VALERIA PEREZ
Amanzi ashushu amaTshayina